]I-Silica ebisekwe kahle kakhulu ye-Silica Eletheleka, i-Quartz Smoreng Clay Breaker Breaker Bowl yegolide neplatinamu - xngtailong
Ikhaya > Imikhiqizo > Fire assay ecubungula > Ubumba olubaleka
Ikhwalithi enhle kakhulu ye-ceramic yobumba yomlilo
Izinga Lokushisa Eliphezulu Resistant Lab Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Clay Iziko ngoba Melting Gold
Ukushisa okuphezulu kwe-ceramic okubaleka ngokwe-ceter enopon
I-Silica ebisekwe kahle kakhulu ye-Silica Eletheleka, i-Quartz Smoreng Clay Breaker Breaker Bowl yegolide neplatinamu - xngtailong
I-Quartz yekhwalithi ekhethiwe njengezinto zokwakha, ezihlanganiswe nokusebenza okuthuthukile kwe-ceramic, esetshenziselwa ikakhulukazi ukuncibilika kweplatinamu, igolide, isiliva, i-anti-acid kanye ne-alkali eqinile, ubulukhuni obunamandla, ukushaqeka okuhle, ukushaqeka okuhle, ukushaqeka okuphezulu Ukumelana. Ingxenye eyinhloko yi-SIO2 ≥80%, i-Al2o3 (≤17%) kanti eminye i-3% (K2O, akukho ukuqhekeka ngemuva kokushisa okungazelelwe nokubanda okungazelelwe ngo-1100 ℃ ⇌ 20, futhi akukho ukuqhekeka Ngemuva kwamahlandla ayi-10 usebenzisa isibhamu sokusika i-oksijini ukuze ufafaze ilangabi le-1700-1800 elisebunqulwini.
I-Silica esetshenzisiwe ye-Silica ebhuqiwe, i-quartz smelting Clay Breaker Breaker Breakerers Bowl yegolide neplatinamu uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., Futhi ijabulele idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa amaphutha emikhiqizo edlule futhi ngokuqhubekayo ibathuthukisa. Imininingwane ye-Silica esetshenzisiwe ye-silica ethambile, i-quartz smelting Clay Breaker Breaker Breaker Bowl yeGold nePlatinamu ingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Umklamo we-Xngtailong kuncike kubuchwepheshe obuhlukile bokusika kwezimboni. I-CAD iphethini Design Tech, i-2D / 3D Prince Tech Tech ye-Tech ye-3D ye-3D ye-Tech yonyawo lwe-3D yamukele umklamo.
1.Yini indinganiso yephakeji?
Thumela iphakheji ejwayelekile noma iphakethe elikhethekile ngokuya ngesidingo seKhasimende.
2.Yini uluphi uhlobo lwesitifiketi onalo?
Sine-iso9001, i-ISO14001, PED, SGS
3.Imikhiqizo yenkinga ethile yekhwalithi, ubungabhekana kanjani na?
Sizobhekana nalo zonke izinkinga zekhwalithi.
I-1.EquiPmentwe: Umugqa ophelele wokukhiqiza nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi.
Ukuphila: Sidlulile kungu-9001: 2005. ejwayelekile, ezinzile, ezithembekile
I-3.Price: Imikhiqizo yethu iqhathaniswa kahle nabanye abathengisi.
I-4.philosophy: ngekhwalithi enhle kakhulu, insizakalo ye-firt-class, ibhizinisi elithembekile
I-Xing xing Tai Long ekhethekile ye-Cera, Ltd yasungulwa ngonyaka we-1997, enakekela ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekhiqiza umlilo azolwa enobuhlakani nekhadeli. Imikhiqizo isetshenziselwa ukuhlaziywa kwensimbi okuyigugu, ukuhlolwa kwezimayini kwelebhu, okulondoloziwe kwamaminerali, kanye nokutholwa kwegolide. Izinto ezibonakalayo ze-Fire Assay Crucibles ziyi-fireclay exutshwe nezinye izinto zokuvuselela, zingamelana nokushisa kuze kube yi-1300 ℃. Banokumelana kahle nokuhlaselwa kwe-flux, ukuguguleka, ukuqhekeka, kanye nokushaqeka okushisayo. Njengomenzi onamandla ochwepheshe womlilo asuswa nge-Cuplel, sinamamitha-skwele angama-7000 amasha wefektri entsha enomugqa wokukhiqiza othomathikhi. Inkampani ihlala inamathela ekusindeni kwekhwalithi, ukusungulwa okusha, kanye nentuthuko, ubuqotho bomkhiqizo, ukuvikela kanye nokucabanga kwamabhizinisi wezemisebenzi ngemuva kwenhloso. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezweni lonke futhi yathunyelwa eJalimane, e-United States, eBrazil, eRussia, amazwe angu-20, ikhwalithi yomkhiqizo idunyiswe kakhulu ngamakhasimende. "Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethekayo" ukuphatha kwethu i-tenet. Silindele ngobuqotho ukubambisana nobuningi bamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, ukuthuthukiswa okuvamile! Uyemukelwa ukuvakasha nokuphenya inkampani yethu.
UMax. Ukushisa kokushisa
I-1600 ° C
Amandla Okubandayo Okucindezelayo
Modulus of Qupture
W / (m · k) (20 ~ 1000 ° C)
Coefficient Sokwanda Thermal
× 10-6 / K (20 ~ 800 ° C)
1. Phezulu ngobulukhuni, kanye nokuphikiswa kwengcindezi kuyas700mpa.
2. Ukumelana okuphezulu okushisayo, ukunwebeka okuphansi kokunwebeka, ukuqina okuphezulu kokushisa.
3. Izinga lokushisa elisebenzayo lingu-1350 ° C, amazinga okushisa asebenza max angu-1600 ° C.
4. Impilo yesevisi ende, ilungele ikakhulukazi ukushaqeka okushisayo.
Sizohlinzeka ngokunemba nangokuphumelelayo futhi sisebenze ngokusho kwemidwebo yamakhasimende.
Sineqembu le-QC elingochwepheshe ukuqinisekisa umkhiqizo wakho kangcono.
Hlola izinto ezingavuthiwe ngaphambi kokuqala ukukhiqizwa.
Ube nokuhlolwa okungahleliwe ngesikhathi sokucubungula.
Yenza ukuhlolwa okungu-100% ngaphambi kokuthumela.
Ukuhlaziywa kwensimbi okuyigugu
Ukuhlala isikhathi eside, kungasetshenziswa kaningi
Amandla aphezulu emishini eyenzelwe ukubekezelela ukushaqeka okunzima kwe-thermal
Ifomula ekhethekile, ukwelashwa kanye nokucindezela inqubo
Ingakwazi ukumelana nezimo eziqinile zokulimala
Ingamelana nokushaqeka okuphindaphindwayo okuvela ku-1300 degree celsius lokushisa kwegumbi
Ukuhlolwa okubonakalayo okuluhlaza
Izikhali nenzinye izinto
Sinemininingwane ephelele yokukhiqiza nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi
Sineqembu lethu ukucwaninga, ukuklama, ukukhiqiza nokuthengisa
Sidlulile ngu-9001: 2005. ejwayelekile, ezinzile, ezithembekile
Imikhiqizo yethu iqhathanisa kahle nabanye abathengisi.
Siyinkampani ehlanganiswe ne-r&D, ukukhiqizwa kanye nokuthengisa ngokuphelele
Ngekhwalithi enhle kakhulu, insizakalo ye-firt-class, ibhizinisi elithembekile
Q: Ungaqala kanjani iphrojekthi?
A: Ukuqala iphrojekthi yakho, sicela usithumele imidwebo ye-Design ngohlu lwezinto ezibonakalayo, ubungako. Ngemuva kwalokho, uzothola izingcaphuno kithi kungakapheli amahora angama-24.
Q: Asizijwayele yini ukuthuthwa kwamanye amazwe, ingabe uzophatha yonke into ye-logistic?
A: nakanjani. Ukuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi futhi odlulile ozobambisana ndawonye kuzosisekela okugcwele kukho. Ungasesazisa kuphela usuku lokulethwa, bese uzothola izimpahla ezisehhovisi / ekhaya. Okunye ukukhathazeka kuya kithi.
Ikhwalithi ephezulu yobumba ye-Ceramic Crainy Fire assay abakhiqizi abanokwethenjwa kwegolide ukubhema uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuhambisana nokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., Futhi ijabulele idumela elihle emakethe. I-Xingtailong ifingqa amaphutha emikhiqizo edlule futhi ngokuqhubekayo ibathuthukisa. Imininingwane ye-High-End End Four Ceramic Clay Fire Assay abakhiqizi abasebenza ngokuntuleka kwegolide begolide bangenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Fire Assay Crucibles inokuphikiswa okuphakeme kunokuphikiswa okujwayelekile ekuqhekekeni ngaphansi kwezimo zokufa umlilo. IMISEBENZI yethu isetshenziswa ezindaweni zokucwaninga kuyo yonke imakethe yamazwe omhlaba. Sinezinhlobonhlobo zobumba nosayizi abatholakala ukubhekelwa imininingwane edingekayo.Ama-rucibles ethu anika impilo ende, ebiyelwe ngokushesha, isivinini esiguqukayo esiguquguqukayo, kanye nokumelana okuhlukile kushintsho olunobudlova lokushisa.
]6A 7A 8a China Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Iziko Ukwakha Futhi Factory Magnesia Cupel ngoba Igolide Ukuqeda kuqhathaniswa imikhiqizo efanayo emakethe, unezinzuzo ongenakuqhathaniswa ekumele ikhokhwe ngokwalesi nokusebenza, izinga, ukubukeka, njll, futhi uyawuthanda idumela elihle emakethe. Xngtailong esifingqa ukukhubazeka imikhiqizo esidlule futhi ngokuqhubekayo ngcono kubo. Ezibekiweko 6A 7A 8a China Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Iziko Ukwakha Futhi Factory Magnesia Cupel ngoba Igolide Ukuqeda kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zakho.Cupel kuyinto refractory ukungena nakwamanye amazwe for iyavuleka oxide phambili lapho umlotha ashaye bopha phambili. Isakhi esiyinhloko magnesia kuyinto magnesium oxide, okuyinto refractory ezinhle kakhulu futhi singamelana ukuguguleka ekucucuzeni ane-alikhali. oxide Lead kuyinto ane-alikhali ecucuza enamandla kakhulu. Emazingeni aphezulu, kokusondelana phakathi oxide phambili futhi Silica unamandla kakhulu, okungaba bahlasele silicate ku cupel. Kukhona silicate ngaphezulu ash cupel usimende cupel. Ngemva bebetha lolu hlobo cupel, kuzoba imigodi phezu kobuso cupel, namatshe ayigugu izolahleka ngenxa yalokho. Ukusebenzisa magnesia cupel, akukho simanga ngemva umlotha ukushaywa, ebusweni kakhulu bushelelezi.
]umlilo Assay yethu crucibles nokunikela ukuphila isikhathi eside, ngokushesha iyancibilika, njalo isivinini ukuncibilika ukumelana obuphawulekayo izinguquko zobudlova lokushisa.
]I-pigment yethu ene-ceramic ene-ceramic inika impilo ende, ukuncibilika okusheshayo okuncibilikayo, isivinini esiguqukayo esiguquguqukayo kanye nokumelana okuhlukile ekushintsheni kwezindlela zokushisa ezinobudlova.Sikhiqiza futhi sinikezela nge-pigment ephezulu ye-ceramic enobumba. Ingxube yesayensi yama-batch ezibonakalayo, ukucindezela okufanele ngamadayi anembile, kanye namazinga okushisa aphothule aphothule lapho ashiswa khona, ahlinzeke ngezinga eliphakeme kakhulu lamandla emishini wokubekezelela ukushaqeka okunzima kwe-thermal. Izinto ezisezingeni eliphakeme ezisetshenziswa ekwenziweni kwazo, zihambisana nokukhiqizwa ngokucophelela, ziqinisekisa ukushisa okuningi ngokubaluleka, ngaleyo ndlela kunikeze inani elithe xaxa.Isicelo main ukuphonsa imibala ebomvu ehlanganisiwe yama-ceramics, usayizi owenziwe ngezifiso ayamukelekile.Izinga lekhwalithi yekhwalithi kanye nenkonzo esheshayo kuyinjongo yethu.
5G / 20G / 30G / 30g / 40g / 40G / 50G / 50g / 55G / 65g / 75g / 75g / 75g
5G / 20g / 30g / 40g / 50g / 55g / 65g / 75g lokushisa High Resistant Lab Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Clay Ngobhojwana NgamaFascist ngoba isampula ukuncibilika gold.High refractoriness, akukho slag, akukho Ukungena, akukho ngokuhlaziya.
izinga okusezingeni igolide ukuncibilika umlilo Assay Ngobhojwana NgamaFascist for laboratories Assay commercial
usayizi Fire yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali Iziko: 5G / 20g // 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g futhi No.8 / No.8.5 / 9 / No.9G / No.9.5 crucibles kukhona avaivalbe futhi senza customzied ngosayizi. amasampula zamahhala avialable test
Ceramic Clay Fire Assay Elensiwe Kokuncibilika Kwegolide Ukuncibilika nokuhlaziywa kwensimbi eyigugu
Izinsimbi zitholwe emlilweni zivusa izinto ezibaleka yizinsimbi eziphuma ekuhlanganisweni kwezinto ezibonakalayo esithandweni somlilo, ngegolide elingamamitha angaba ngu-2 000. Izindlela ezinokwethenjelwa zokudlala
Mineral umlilo Assay ubumba Ngobhojwana NgamaFascist singesegolide
Supply izinhlobo umlilo Assay crucibles, imodeli Normal and ezingeni ukuthekelisa kungaba ukhethe, Yenza kwakwamukeleka.Fire kulingwa ukusetshenziswa Ngobhojwana NgamaFascist esiyinhloko Precious Metal Ukuhlaziywa, Izimayini Laboratory, Laboratory Testing, amaminerali Assaying, Fire Assaying, Gold Assaying